Muuqaallo / sawirro | Djibouti Nature
Muuqaallo / sawirro
Boggani wuxuu ku gudo jiraa dib-u-dhis baaxad le. Waxa aan si is-daba-joog u cusbooneysiin doonaa dhammaan waxa ku dhigan. Waxa halkan aad ka daawan doontaan tiro yar ku jirta sawirrada aannu hayno. Fadlan dib noo soo booqda si aad u aragtaan sawirrada waxyaabaha dabiciga ah sida dhirta, xawayaanka iyo muuqaalada cayaayibka ah ee ee dalkayagu caanka ku yahay. Ta kele, haddii aad aragto iswaafaqla’aan ama arrimo la xidhidha lahaanshaha waxa boggan ku dhigan, nala soo xidhiidh.